Kharkov - guta rakakurumbira kuUkraine pakati vadzidzi vokune dzimwe nyika
Kharkiv (Ukrainian), kana Kharkov (ChiRussian), uyewo guta rechipiri pakukura muUkraine (pashure Kyiv, ehe saizvozvo). 3/4 remakore akapfuura akarasikirwa ayo mamiriro guta guru reUkraine (Soviet Ukraine), asi guta dzidzo muUkraine.
Vagari Kharkov ndiko 1.5 mamiriyoni evanhu. Kharkiv ane richcultural, nesayenzi, dzidzo, senga uye mumaindasitiri upenyu. City inoshanyirwa mazana maindasitiri makambani. Kunyange munguva dambudziko guta kukura. New Hotels muri kuvakwa.
Transport hurongwa Kharkov ndomumwe yakanakisisa muUkraine. Panguva gadziriro kuna Euro 2012, hurumende guta akagadzira migwagwa yakawanda uye vakachinja vamwe marshrutka pamusoro nechepakati mumigwagwa kuti motokari zvishoma rinorema. Kharkiv Metro ndiko 35 ? km refu uye ane 28 nhepfenyuro. Paiva nezvitima itsva kutsanya laucnhed kubatanidza maguta makuru muUkraine (Kyiv, Donetsk, Lviv).
Kharkov Airport rave kunatsiridzwa uye kubatana itsva vari kufamba anenge ose hafu gore.
The rinofarirwa kupfuura muganhu pakati Kharkiv ndiye Freedom Square (Ploshcha Svobody), rechitatu pakukura cheguta muEurope, uye anotora 7th nzvimbo apo achitaura pamusoro nyika. About dzimwe zvinokwezva Kharkiv unogona kuverenga pano.